Dhageyso:Musharaxa Madaxwaynaha Jubbaland oo ugu baaqay Gudiga Doorashada Jubbaland inay iscasilaan – Gedo Times
Dhageyso:Musharaxa Madaxwaynaha Jubbaland oo ugu baaqay Gudiga Doorashada Jubbaland inay iscasilaan
6th May 2019 admin Wararka Maanta 1
Gudoomiyaha Gudiga Doorashada Jubbaland ee axmed madoobe magacowday Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay inay Odayaasha jubbaland kismaayo keenayaan si ay ugu soo gudbiyaan sadex Musharaxa oo u tartamaya Xildhibaanka beeshaas ayakuna kala saarayaan.
Hadalkaas kasoo yeeray Gudoomiyaha Gudiga Doorashada Jubbaland ee axmed madoobe magacowday Xamse Cabdi Barre ayaa waxuu ka caraysiiyey Siyaasiyiinta iyo Waxgaradka Jubbaland.
Musharaxa Madaxwaynaha Jubbaland Cabdi warsame “Deeq Faandhe” oo saaxafada Maanta la hadlay ayaa waxuu sheegay inaan la qabali Karin hadalka kasoo yeeray Gudiga Doorashada Jubbaland waana inay iscasilaan sababtoo ah dad dhex dhexaad ah ma ahan waxayna fulinayaan arimihii axmed madoobe u idmaday.
Muuqaal:Shirka wadatashiga ee u dhexeeya madaxda dawladda FS, dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa maalintii 2-aad ka socda Garoowe
Ilaa haatan Maxaan ka baran karnaa Shirka Garoowe?
doorasha jubbaland waa mid dhacayso waqtigii loogu talagalay.asxaabta facebook,youtube iyo websites maryooleydu waa inay maanka ku hayaan tolow haddii aad gafuurka dhisto ama aad calaacasho inaysan jirin cid dhag jalaq u siinaysa.waa laga soo gudbay sheekadii ahayd boowe baasto caydhiina ceesh malagu fuuday.